Sida loo soo dejiyo sawirka Google Earth leh AutoCAD - Geofumadas
Febraayo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Ka hor inta aynaan arkin sida loo sameeyo kala cayncayn ah, ArcGIS, waxaanan la yaabnay in caansaanka AutoCAD aysan gaadhin gorgortan wanaagsan oo la gashay Google si ay u sameeyaan sidoo kale. Aynu aragnno wanaagga, xun iyo fool xun ee gorgortankan:
... GOODI ... waa mid sahlan
Dooro qaybinta Google Earth
Sidaa awgeed, waxa aad sameyso waa in Google Earth furan tahay, lakulmaysa lakabka dhulka, masaafada waqooyiga iyo aragtida caadiga ah. Waa in aan xusuusanno habka ugu wanaagsan ee aan heysano, waxaan ku heli karnaa xalinta saxda ah, laakiin sidoo kale waa run in sawirada masaajidada loo baahan yahay.
Soo saarida sawirada laga bilaabo AutoCAD
Inaad ku sii jirto AutoCAD, waa inaadan hoos udhicin daaqada GoogleEarth, mana xirin, laakiin aragto aragtidaada ugu weyn sababtoo ah waxa barnaamijku qabanayo durdur isticmaalka.
Markaas kadib waxaan isticmaalnaa icon-ka ku yaala dhinaca midigta, ama u dhaqdhaqaaqa adoo adeegsanaya "wareejinta"
Haddii aad haysatid AutoCAD Map3D ama AutoCAD 3D, muuqaalku wuxuu noqon doonaa geo-ku-xiran inta u dhaxeysa iskudhafka sanduuqa Google Earth (ilaa inta nidaamka la saadaaliyo lagu qeexayo sawir-isticmaalka)
Haddii aysan jirin mid ka mid ah labada barnaamij ee hore, laakiin kaliya AutoCAD, ama Architectural, ikhtiyaarka ayaa la bilaabi doonaa si loo muujiyo labada gees ee sawirka iyo xagasha wareega ah sida haddii aan isticmaalnay maamulaha raajada. Sidaa darteed horeyba waa ku haboon tahay in lagu muujiyo geesaha shubanka sida ku cad hore ee boosteejo muuqaal ah oo sawirada laga helay Google Earth si xun.
Ku rakibida fidinta
Si aad u rakibtid codsigan waa in la soo dejiyaa laga soo bilaabo bogga shaybaarka AutoDesk, isla faylka la furtay wuxuu yimaadaa version for AutoCAD 2007, inkastoo middani waxay u adeegtaa oo kaliya in ay daabacdo moodooyinka kml ee ka yimid AutoCAD ilaa Google Earth.
Marka feylka la joojiyo, way socotaa oo waa inaad doorataa waddada rakibida ee AutoCAD halkaas oo aan rabno in lagu xiro, haddii aad haysato wax ka badan hal barnaamij, hal rakibo waa in loo sameeyaa mid kasta.
WAA INAAN ...
Inkasta oo ay tahay nidaam loo oggol yahay Google Earh, muuqaalku wuxuu ku yimaadaa miisaanka midabada oo aan midab lahayn, oo ah shuruudaha Google. Inkastoo ay jiri doonaan kuwa sidan u maamula sida kiiska Mashinka 3D ayaa ku qallajisa maadada.
Marka sawirkaas la soo dhoofiyo waxaa lagu kaydiyaa isla faylka halkaasoo faylka dwg la keydiyo, iyadoo la dheereynayo .jpg iyo qaadashada xarfaha koowaad ee magaca feylka feylka ... inkastoo ay tahay jpg jahwareerka guryaha.
Cabbirka pixel waa qiyaasta shaashadda la soo bandhigay, sidaas daraadeed waa soo dhaweyntu waa, qiyaasta pixel-ka yar ayaa la helayaa sababta oo ah feylku wuxuu kaliya u aqoonsanayaa iskudhafka qaabka oo wuxuu u kala jiidan yahay cabbirkaas.
Waa qalab sheybaarsan, AutoDesk ma hubineyso haddii ay ku jirto qaybta soo socota ay noqon doonto bilaash ... waxaan rajeyneynaa sidaas
Inaad noqoto shaybaarka sheybaarka ayaa la bixiyaa "sida" waa, laakiin fiicnaan laheyd haddii ay noqoto midkale AutoCAD had iyo jeer sidan oo kale ah iyo kiiska Google oo dhan wuxuu ahaa Beta.
Waxay kaliya la shaqaysaa shatiga Google Earth Pro, sida muuqata, haddaba waxaad xitaa $ 400 dabacsan tahay oo u qalantaa liisanka ama aad isha ku hayso.
... Si kastaba, waxay u muuqataa inaan jeclaan lahaa inaan sii wado sidaan kala cayncayn ah, sababtoo ah waxay kaliya igu kacday $ 245 oo aan bixiyay.
... cusbooneysiin. AutoDesk waxaa ku jiray qalabkan laga bilaabo AutoCAD 2009, waxaan sameeyey cusbooneysiin ee version cusub ee download, sidaa daraadeed waxay horay u keentaa waxaa ku jira sida lagu muujiyay boostadan.
Qalab kale oo sameeya tani, oo ka sarraysa sababta oo ah sawirku wuxuu ku yimaad midab, oo leh qoto dheer iyo miyir, en Plex.Earth
Post Previous«Previous Waxay u egtahay sida Internet Explorer u dhiman doono
Post Next Iibsiga 3D Dhulka Google Earth ilaa AutoCADNext »
16 Jawaab in "Sida loo soo dejiyo muuqaalka Google Earth oo leh AutoCAD"
Percy slim of carpio isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa inay jirto xitaa mid xiiso u leh baska 3D, iyo waxaan u baahanahay buug-gacmeedka autocad 3d ee ingiriiska mahadnaq
Maxaa dhacaya waa inuusan shaqayn, sababtoo ah qabashada mid kasta waxay leedahay khafiif ah, taas oo Google Earth sababto in ay kaa hor istaagto inaad ku biirto miisaaniyada hubaysan oo leh shaashado yaryar.
Waxaa intaa sii dheer, haddii aad hirgalisey qaabka 3D waxaad yeelan doontaa kala-badasho badan.
renan fernandez Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan badbaadin karaa mashiinno badan oo google ah oo ku yaala qalab adag kadibna geliyaan autocad waxayna helayaan khariirad leh xal wanaagsan. laakiin markaan doonayo inaan dhajiyo xayawaanka waxaan ogaadaa inay jirto dhalanrog.
Mid ka mid ah mowjadaha miisaaniyada si fiican laakiin dhamaadka kale kama dhicin.
Waxaan u gudbinayaa autocad iyadoo la adeegsanayo tixraaca sawirada raajada iyo daaqada aan helayo qiyaasta naafada / ok.
Tigrillo isagu wuxuu leeyahay:
adigoo isticmaalaya codsiga:
1) Screening for MAC waxaad ku qaadi kartaa wax kasta oo ku dhacaya shaashaddaada
2) Camtasia ee MAC wuxuu u shaqeeyaa sida Screeny
iyo video this safarkaaga .. waxaad ku dari kartaa PPT-gaaga
Wax fikrad ah, waxaan qabaa inaadan awoodin
Waxaan samaynayaa bandhig dhibic oo aan u baahnahay in aan helo gobol gobol, waxaan jeclaan lahaa in aan ku soo dhaweeyo oo aan ku qoro kamarad loo mariyo Google Earth ka dibna u soo dhoofiso awoodda, qof ayaa ii sheegi kara sida loo sameeyo?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u soo dejin karo fiidiyowga (kaas oo la duubay safar leh kamarad laga heli karo barnaamijka) laga bilaabo dhulka google-ga ilaa awoodda.
Josue isagu wuxuu leeyahay:
Taliska Soo-gelitaanka lama shaqeynin, in kasta oo la raaco tilmaamaha
Waa maxay micnaha ereyga?
marka aad gashanayso sawir la tarjumay oo muujinaya dhalanrog X ama Y, cidna ma yaqaanaa sida loo saxo qaloocinta xagal kasta, rajeynaya autocad?
haa, cajaladda ku jirta xNUMX horeyba waxay u dhacdaa mid isku dhafan
Waxaan haystaa AutoCad C3D 2008 kuma soo dhoweyn karo amarka aad tiraahdo ... Laakiin waxaan ogaaday in aan dusha ka soo dejin karo dusha sare oo aan sawirku lahayn "soo-dejiye"
abdelo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado wax badan oo aan la shaqeeyo Autodesk Land Desktop
Waxaan isku dayay aalad xiiso leh (Google Downloader Khariidad) si aan PNG uga soo qaado Khariidadda Google.
Nidaamka bilaashka ah wuxuu ku dhejiyaa zoom zoom.
Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku biirto dhammaan png.
Ka dibna Quantum GIS iyo warbixinta ayaa hoos u dhigaya geesaha (indhaha la socoshada) iyo isticmaal saldhigaaga GIS-gaaga.
Tababar xiiso leh, hambalyo